Bixinta alaabooyinka ka imaanaya Switzerland
Adeega Swiss Apteka wuxuu bixiyaa adeegyo iibsashada iyo keenista alaabooyinka ka yimaada Switzerland. Iibsiyada waxaa lagu sameeyaa oo kaliya farmasiyada rasmiga ah, dukaamada iyo si toos ah uga soo iibsadaha. Diritaanka waxaa sameeyey Switzerland Post.
Waxaad hubsan kartaa tayada Swiss ee alaabta la soo bandhigay.
1) gaarsiinta caadiga ah ee toddobaadyada 2-3 (Switzerland Post)
2) Bixinta Degdega ah ilaa 48 saacadood meel kasta oo Yurub ah, ilaa saacadaha 72 meel kasta oo adduunka ah (halka diyaaradda ku duusho). Waxaa jira xayiraad xagga kastamada. Sheeg qiimaha iyo ikhtiyaarada gudbinta shaqsi ahaan.
Shirkadaha gaadiidka iyo shirkadaha boostada waxaa laga soo diraa Switzerland. Dal kasta waxaa jira xayiraad kasto oo ah qiimaha ugu sarreeya ee alaabta la soo diro, fadlan u xisaabtan arrintan.
Bixinta Yurub. Heerka bixinta waxay kuxirantahay amarka degdegga ah waxaana loo xisaabiyaa shakhsi kasta macmiil kasta.
Diyaarinta Aasiya: Gawaarida laga keeno Switzerland ayaa suurogal ah in Hong Kong, laga bilaabo halka aad ku geli karto Asia sida shirkadaha kale ee gaadiidka. Intaa waxaa dheer, waxaad heli kartaa baqshiish ay soo dirtay Post Post Swiss xafiiska boostada ee gobolka aad ku nooshahay.
Gaadiidka Mareykanka. Bixinta fitamiinada iyo daawooyinka aan rijeetada lahayn ee aan lahayn xaddidaad, daawooyinka dhakhtarku qoro, waa in lagu daraa si kale.
Bixinta Ruushka. Lacag bixinta amarrada u dhiganta 15.000 ruska Ruushka ayaa la sameeyaa markii la helo risiidh. Waxyaalaha ayaa ka qaalisan 15.000P. bixinta horudhaca buuxa. Halista khatarta ah ee la xidhiidha ka gudbidda xuduudda waxaa soo raacaya macaamiilka, haddii aanay duubku ku dhaafin caadooyinka dalkaaga, waxay ku noqotaa Switzerland. Dhammaan qiimaha ku yaala goobta ayaa horey loogu soo dhiibay iyada oo la keenayo Moscow.
Waxaad dalban kartaa wax soo saar, qiimo ahaan 1000 euros. Waxyaabaha ayaa ka qaalisan 1000 euros aan la keenin Ruushka sababtoo ah xayiraadaha canshuurta, ama waxay ku xiran yihiin waajibaadyada kastamyada 30% qiimaha alaabta.
Bixinta dalal kale oo adduunka ah. Gaadiidka caadiga ah.
Adigoo adeegsanaya adeega Swiss-Apteka, waxaad ku amri kartaa daawooyinka, fitamiinada, alaabada daawada, daawooyinka carruurta iyo alaabooyinka kale ee dukaamada iyo farmasiyada ee Switzerland iyo wadamo kale oo adduunka ah. Marka lagu daro qaddiyadaha la soo jeediyey, waxaad ku amri kartaa waxyaabo kale oo la xiriira isticmaalka shakhsiyeed ee aan laga iibsan karin dalkaaga.
Haddii aad qabtid su'aalo dheeraad ah ama aad hayso iskaashi iskaashi, u soo qor info@swiss-apteka.com